China excavator na-ewusi ndị na-emepụta ịwụ ala na ndị na-eweta ya | MINYAN
Excavator na-ewusi ịwụ ala rụọ ala nwere akụkụ ala na akụkụ efere, meziwanye nkwụsị na-eyi ma nwee ogologo oge ọrụ karịa ịwụ excavator earthmoving. Nke a bụ ụdị ịwụ excavator kachasị ewu ewu. Nhọrọ "etiti etiti" dị mma, ma ọ bụ mmalite, mgbe ọnọdụ ngwa adịghị ama nke ọma.
Maka ọtụtụ mmetụta na ọnọdụ abrasion gụnyere unyi agwakọtara, ụrọ na okwute. Omuma atu: Ngwuputa onodu ebe Penetration Plus tip ndu sitere na 400 rue 800.
onye na-egwupụta ihe na-ewusi bọket na-arụ ọrụ ala ka a kwadoro ya maka trening na ọrụ ọrụ, yana maka onye isi ọrụ na-arụ ọrụ n'ọtụtụ ọnọdụ dị iche iche. Okpukpo okpuru na akuku na-eyi efere karịa Ogwe Aka Ọrụ Ndị Isi maka ịdịte aka karịa. Ihe nkwụnye na ndụmọdụ maka bọket dị elu maka arụmọrụ na-adịgide adịgide. A na-ebu ụzọ gụọ sideba maka ndị na-egbutu nhọrọ, na n'ọtụtụ oge, ndị na-echebe sidebar.
Tụkwasịnụ IkikeTụkwasịnụ Ikike:300 Ibe / iberibe kwa ọnwa excavator ịwụ
Nkwakọ ngwaahịa & nzipuNkwakọ ngwaahịa nkọwapallet osisiPortQingdao / ShanghaiEtiti oge :
Nka na ụzụ usoro
Xuzhou Minyan Import & Export Co., Ltd bụ a na-eduga emeputa maka excavator Mgbakwụnye na China. All ngwaahịa 'àgwà na-nditịm n'okpuru akara si nhazi na nnyefe. Site na-aga n'ihu ọhụrụ na mma, ụlọ ọrụ nwere ISO 9001, OA asambodo na patenti oru na-aga nke ọma. Anyị na ngwaahịa na-eresị ka ọtụtụ ebe anụ ụlọ na oversea ahịa na ogologo oge mmekọrịta e mepụtara Anyị ozi bụ: Ogo izizi, Ọrụ kachasị, na Innovation dị oke mkpa Uncompromising nkwa elu àgwà ma na-eche echiche ọrụ na-enweta anyị ezigbo aha na ndị ọzọ na-abịa mmekọ. Anyị ga-anọgide na-emeziwanye ngwaahịa ndị ka mma iji jeere ụwa ahịa ozi. Anyị na-atụ anya iso gị rụọ ọrụ!
Emere bọket a na pin ka ọ nwee ike iji nweta oke igwu alaịrụ ọrụ mgbe ị na-edebe ọtụtụ ọrụ na ịdị mma nke di na nwunye. Ntinye okirikiri bụbelata ma nye ohere ka 10% mmelite na nkwụsịtụ ike ma e jiri ya tụnyere aot pin na ịwụ na coupler Nchikota.Pin Grabber Arụ Ọrụ bọket dị maka 315-349 excavators, na GeneralEbumnuche ma sie ike ọrụ.
Ọrụ Pin Grabber
A na-eji bọket ike iji rụọ ọrụ na abrasive ngwa ebe ike ịgbagha na oge okirikiridị oke egwu - na maka iji ya na ihe ndị dịka unyi na nkume jikọtara ọnụ. (Ọ bụghịakwadoro maka ụrọ.) A na - eme ka ike gbasaa gbasaa n'ihi mgbada na - agbadamụbaa pin pin. Ugboro igwe n'oge otutu ihe ka mma karie ogoịwụ na a yiri ngwa.Arụ Ọrụ Dị arọ Buckets dị maka ndị gwupụtara ala 320-333
A na-ahazi bọket nwere ikike dị elu iji rụọ ọrụ na nnukwu ụgbọala na-ebugharịngwa. Site n'iji ngwa kwesịrị ekwesị ma melite ya, bọket ndị a ga-akpali ihe ndị ọzọna obere ego nke gafere - na-eme ka mmepụta ihe kachasị.Akwa ikike ịwụ dị maka ndị na-egwu ihe na 336-390, na General Duty durability.
Nke gara aga: excavator ripper
Osote: excavator ịwụ eze